यी युव’तिले एक्लै रुम’मा हुदा यस्तो सम्म गरे’पछी…. – Dailny NpNews
यी युव’तिले एक्लै रुम’मा हुदा यस्तो सम्म गरे’पछी….
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २०, २०७८ समय: १७:०८:४१
तपाईको कुनैपनि सम्बन्धलाई दिगो र सफल बनाउँन सबैभन्दा पहिले तपाईमा बिश्वास हुनु पर्दछ । सधै सकारात्मक सोच पनि हुनु पर्दछ । तरपनि यहाँ दैनिक लाखौं सम्बन्धमा बिभिन्न समस्याहरु आइरहेका छन् । कहि न कही चुकिरहेका छन् । भत्किरहेका छन् त टुटिरहेका छन् । किनकी सम्बन्ध सफल बनाउँन धेरै समय र मेहनत लाग्छ । यसमा प्रेम र इमान्दारी जस्ता धेरै कुराहरुले सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँने गर्दछ ।
एक अर्कावीच हँसाई राख्नुस् आज भोलीको एक अर्कौसँग मोबाईल चलाएर बस्ने अनि एउटाले गरेको काममा अर्कोले कुनै पनि ध्यान नदिने हुदा सम्बन्धमा चोसो पना आईरहन्छ । त्यसैले गर्दा आपसमा दिल खोलेर हाँस्नुस् किनकि हँसाईबाट शरीरमा अक्सीटोसिन हार्मोन बन्ने गर्दछ जुन हार्मोनले सधै मुड सफा राख्छ। सधै हाँस्नेवाला जोडीको साथमा धेरै खुशीयाली रहने गर्दछ । यिनीहरुले हाँस्दै मुस्कुराउँदै जीवनको कैयौ मुश्किलका घुम्तीहरुलाई सजिलै पार लगाउँछ ।